VW တို့ FOR 334947 Shock ကိုစုပ်ယူ - တရုတ် Ningbo Jiangbei က Hyper အော်တို
shock ကိုစုပ်ယူ Components
Chrome ကပန်းကန် piston rod
ဆွန်း piston rod
base အဆို့ရှင် Sintered အပိုင်း
piston Sintered တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
လှံတံကိုလမ်းညွှန် Sintered အပိုင်း
shock ကိုစုပ်ယူ Tube
shock ကိုစုပ်ယူအေးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီး Tube
မော်တော်ကားသည် shock ကိုစုပ်ယူ
မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် shock ကိုစုပ်ယူ
semi-သတ္တု Brake System ကို
ကား semi-သတ္တု Brake System ကို
မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် semi-သတ္တု Brake System ကို
ဓာတ်ငွေ့နွေချောင်းတွေ Oxy-nitride Piston ချောင်းတွေ
အမှုန့်သတ္တု Adjustments ထိတ်လန့်လှံတံလမ်းညွှန်များပစ္စည်းများ
ခက်က Chrome 48 နာရီငန် Shock piston rod Ha မှုတ်ဆေးဘူး ...
22mm Shock ကဓာတ်လှေကား4×4Shock piston rod
သံမဏိ cardan pto drive ကိုဟိုက်ဒရောလစ်ဝင်ရိုး
VW တို့ FOR 334947 Shock ကိုစုပ်ယူ
ဏ Ring ကို Sintered အပိုင်း Shaft များနှင့်ရေနံအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် coil သော့ခတ် ...
High Quality YBR125 မဟုတ်သောကျောက်ဂွမ်း 390G မော်တော်ဆိုင်ကယ် bra ...
အမျိုးအစား: shock ကိုစုပ်ယူ
shock ကိုစုပ်ယူအမျိုးအစား: ဟိုက်ဒရောလစ်
Size: နျ Standard, Standard
ကားတစ်စီးစေ VW တို့ Ford
NO oe .: 334947
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: က Hyper အော်တိုသို့မဟုတ်အခြား
အထူး Size: ရရှိနိုင်
လက်မှတ်: က ISO / TS16949
KYB NO: Powder Coating / Chrome ကို
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်-ပလတ်စတစ်အိတ်; ပြင်အဘိဓါန် Standard ပုံး Box ကို
မျက်နှာပြင်အရောင်: Black ကသို့မဟုတ်ဖောက်သည် requiremnet အဖြစ်
မိမိစိတ်ကြိုက် Box ကို: ရရှိနိုင်
1. အပြင် -Standard ပုံး Box မှာ shock ကိုစုပ်ယူ
အပိုင်းအမည် VW တို့ FOR Shock ကိုစုပ်ယူ
KYB NO ။ 334947
မျက်နှာပြင် အရောင် Black ကသို့မဟုတ်ဖောက်သည် requiremnet အဖြစ်
ဂလက်ဆီ (WGR) [1995-2006]
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး 2002: ISO9001 / TS16949 အားဖြင့်ကောက်ယူ
ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း IQC, IPQC, FQC, QA သို့
အဖုံး အတွင်းစိတ်-ပလတ်စတစ်အိတ်; ပြင်အဘိဓါန် Standard ပုံး Box ကို
Shock ကိုစုပ်ယူ၏ဝိသေသ :
1.Piston လှံတံကြေးမုံ-မျက်နှာပြင်ကုသမှုခက်မှာ chrome ချထားတဲ့ 800 MPA အထက်ဆန့ stregth နှင့် compression အစွမ်းသတ္တိကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
2.Oil အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဘဝ 2000000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသကဲ့သို့မြင့်မားသည်, ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်ရေနံတံဆိပျကို -NOK, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
disserent temprature အခြေအနေများအတွက်ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်သံချေးခုခံဖို့ခုခံ၏ 3.Absorber ရေနံကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု။
သံ-အခြေစိုက်စခန်း၏ပစ္စည်းများကိုအဘို့အဆွီဒင်ပုံစံတင်သွင်းသတ္တုဗေဒအသုံးပြုမှုကိုအမှုန့် 4.Powder, ထုတ်လုပ်ရန်ဂျပန် techologies ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။
1. အပြင် -Standard ပုံး Box ကို
ကျနော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဖြန့်ချီအထူး ထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စတင်လှံတံ, sintered အပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေမှုကိုချေဖျက်, အခြေခံအဆို့ရှင်, လှံတံကိုဧည့်လမ်းညွှန်, နွေဦးအဖြစ်နှင့်ထိတ်လန့်ကိုစုပ်ယူအစိတ်အပိုင်းများ,, အတွင်းစိတ်ပြွန်, ပြင်ပြွန်, ရေနံဖျံ, ရော်ဘာ Bush ။
· 1 ။ More reliable :Strictly quality control and many years experience , we have quality control person for each purchase order .
· 2. အရည်အသွေးအာမခံချက်: အတိအကျအင်တာနေရှင်နယ်အညီ စံ
·3. သာလွန်ဝန်ဆောင်မှု: ငါတို့သည်သင်တို့၏နှုန်းတောင်းဆိုမှုကိုကျေနပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု pre-ရောင်းအားတာဝန်ထမ်းဆောင်, အရောင်းစဉ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုတင်ဝန်ဆောင်မှုလမ်းဖြင့် coustomes များအတွက် afer-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပြင်ဆင်လော့။
Ningbo, Zhejiang, တရုတ်
ယခင်: လမ်းမကြီး Shock က4×4Shock ကိုစုပ်ယူ off
လူမီနီယမ်အော်တို Shock ကိုစုပ်ယူ
ကားအစိတ်အပိုင်းများ Shock ကိုစုပ်ယူ
လျှပ်စစ်စက်ဘီး Shock ကိုစုပ်ယူ
High Quality OEM Shock ကိုစုပ်ယူအပိုင်း
High Quality Shock Abso rber
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နောက် Shock ကိုစုပ်ယူ
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Shock ကိုစုပ်ယူ
Precision Shock ကိုစုပ်ယူအစိတ်အပိုင်းများ
Br စီး Forklift ကားတစ်စီးစွမ်းဆောင်ရည် Aftermarket ...
343290 Shock ကိုစုပ်ယူ
D563 အော်တို Bremse အော်တိုဘရိတ် Pad ထုတ်လုပ်သူများ
Mono အဘိဓါန် Tube Struts Shock ကိုစုပ်ယူလှံတံလမ်းညွှန်
အော်တို Bremse 04465-42160 ကားဘရိတ် Pad
နေရပ်လိပ်စာ: တစ်ဦးဘိုလမ်းမကြီး 168, Huan သူ Bluding 1. ROOM တွင် 9-3 ။ Ningbo
E-mail ကို: export@hyperauto.com.cn
ဖက်စ်: + 86-574-87667644